Cunto-celin waxay soo-jeedinaysaa aaladaha Calaamadaha Web-ka ah ee Ka Saarista Xogta
Shabaqa si gaar ah loogu talagalay inay soo saaraan macluumaad faa'iido leh oo ka socda internetka. Waxa kale oo loo yaqaanaa barnaamijyada wax lagu goosto ee shabakada waxayna faa'iido u leeyihiin qof kasta oo isku dayaya inuu ururiyo macluumaadka laga helo boggaga internetka ee kala duwan. Waxaa jira tiro badan oo qalab ah oo ka caawiya soo saarista xogta oo habaynaya si habboon. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadan si aad u soo ururiso macluumaadka ku saabsan alaabta kala duwan, siciradooda, waxayna ku kori karaan ganacsigaaga internetka. Qaar ka mid ah qalabyada iyo software-yada khalkhalka webka waa qaali, halka kuwa kaleba ay kuugu kacaan waxba. Isticmaalidda, waxaad ka qaadi kartaa macluumaadka bogagga shabakadda, ka shaqeeya xogta kala duwan ee macluumaadka oo aad abaabusho xogta isla markiiba - buy blotters acid.
Aynu hubinno liiska 3 qalabka adeegga shabakadda ee faa'iido leh si loo soo saaro xogta.
1. Kharajaynta Khabiirka
Waxaad isticmaali kartaa Khabiir Xirfad leh si loo soo saaro, loo abaabulo loona dhiso macluumaadka bogagga kala duwan. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee macluumaadka saaran iyo waxay ku haboon tahay dadka ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga ahayn. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada iyo kuwa websaydhku waxay doortaan Khabiir Xirfad sababtoo ah sifooyinka gaarka ah iyo fursado badan. Haddii aad rabto inaad hesho qaar ka mid ah xogta macmiilka gaar ah oo aad rabto inaad sare u qaaddo waxqabadkaaga bogga, waa inaad isku daydaa Khabiirka Xirfadaha. Macluumaadka waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan. Waxay ka koobantahay xogta warbaahinta bulshada, wargeysyada, waraaqaha safarka iyo goobaha sarrifka..
Uipath wuxuu caan ku yahay tiknoolajiyada barashada mashiinka iyo waa feyreeye weyn oo xogta webka iyo qalabka sawirada. Waxay u fiican tahay labada calaamadood iyo kuwa aan codka lahayn oo si dhib yar u dhaafi doona caqabadaha feylasha xogta aasaasiga ah. Waxaad qaban kartaa hawlo kala duwan adigoo isticmaalaya Uipath, kaararka kala duwan iyo dukumiintiyada PDF, hel macluumaadka laga soo qaado sawirada waxayna ku keydin karaan xogtaada dariiqa adag. Waxa kale oo aad kumbuyuutarin kartaa xayiraadda guji, foomka buuxinta iyo hawlaha kale ee la mid ah Uipath mana u baahnid inaad leedahay xirfadaha barnaamijka. Qalabkani wuxuu kufaraa noocyo kala duwan oo xog ah oo ku saabsan shaashadda, natiijooyinkana waxaa lagu helayaa foomka JS, Silverlight, iyo HTML. Uipath waxay sidoo kale ka caawisaa in ay shabakadaha internetka ku uruuriso mashiinnada raadinta oo ay qaali u yihiin shakhsiyaadka iyo bilowga. Waa inaad isticmaashaa barnaamijkan oo kaliya marka aad leedahay ganacsi internetka oo aad rabto in aad xoqdo bogaga internetka ee culus.
Import.io waa mid ka mid ah qalabka wax soo saarka ugu fiican iyo kan sare ee shabakadda internetka. Waxaad ka faa'iideysan kartaa siyaabo kala duwan, waana bedel weyn oo loogu talagalay Kimono iyo barnaamijyada kale ee shabakada ah. Waxay muujineysaa jaantus aan la arki karin oo ku saleysan baahidaada iyo rajooyinkaaga. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad muujiso xogta oo aad geliso ereyada muhiimka ah oo ha ahaato Import.io shaqeeyaa. Waxaad kari kartaa URL-kan midba midka kaddibna kormeera tayada xogta la xoqay. Import.io waxay u gudbinaysaa macluumaadkaaga faa'iido u leh mareegaha Google, oo waqti badan iyo tamar badan ku badbaadinaya. Waad ka filan kartaa in aad xoqdo 10,000 oo bog oo shabakad ah labaatan daqiiqadood iyadoo ku xiran hadba sida ay u adag tahay iyo dhererkooda. Waxyaabaha ugu fiicani waa in import.io uu ka yimaado kharashka oo waa mid ku habboon ardayda aan barnaamijka ahayn.